Oogqirha abaninzi abacebisi ukuvuselela umsebenzi wesondo osebenzayo kwiinyanga ezimbini zokuqala emva kokubeletha. Ngeli xesha, kuyimfuneko ukuba isibeletho sibuyele kubukhulu obuqhelekileyo, kwaye i-mucosa ibuyiselwe ngokupheleleyo.
Xa usebenzisa i-seams, kuthatha ixesha lokuphilisa okupheleleyo. Kodwa sonke sizodwa, ngoko ukuzalwa kubakho ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba bekungekho iingxaki, gcina imithetho elula kwaye ulale ngesondo nomyeni wakho othandekayo.
Cinga ngezizathu zokungavumi ngesondo, abafazi abathiwa kunye nemithetho ephambili yesondo emva kokubeleka, okuya kubanceda. Into yokuqala ekufuneka yenziweyo ukuzisa izihlunu zesisu kwisithoni eqhelekileyo. Ngenxa yoko, kukho i-Kegel ekhethiweyo. Into ephambili kukujongana nokucwangciswa, kungabuyiselanga, kwaye umphumo awuyi kuphuza ukuchaphazela ulwalamano lwakho nomyeni wakhe.
1. Ukucwina kwesini. Umgangatho we-estrogen egazini lomama ononophala uncitshiswa. Ngako oko, i-lubrication yemvelo kwisisu iveliswa ngaphantsi. Abasetyhini, abajikeleza ukuhamba kwimihla yokuya esikhathini, baziva bengakhululeki. Abasetyhini abaninzi bayayika ukuva iintlungu ngexesha lokulala. Kodwa intlungu iyenzeka kuphela xa isisu sisomile. Ngoko ke, kukufanele ukusebenzisa i-grease kwaye uya kuphepheka ukuvakalelwa.
2. "Ubuvila" ukulala ngesondo. Umfazi ukhathele kakhulu kwiinyanga zokuqala emva kokubeletha. Umzimba awunakulinganiswa kakhulu nesondo. Ihomoni ye-motherhood-prolactin, ivumela ngoku ukuba ucinge nje ngomntwana. Kodwa oku akusiyo isizathu sokulibala malunga nokuzonwabisa ngesondo nomyeni wakho othandekayo.
3. Ubume bomzimba butshintshile. Akukho nto yenzeke. Kukho iindlela ezizodwa ozenzayo, kwaye kufuneka usebenzise emva kokubeletha. Kwizibhedlele zokubeleka, ngokuqhelekileyo kukho umqeqeshi wokuqeqesha umzimba oya kukunceda uphuhlise inkqubo yokubuyisela.
4. Umyeni uthatha ngokwahlukileyo. Le ndoda iyaqaphela, ayifuni ukuphazamisa kwakhona. Ngoku, njengaloo, ulungelelanisa indima entsha. Zama ukuqinisekisa ukuba uyamkhathalela umntwana kunye nawe, oku kuya kumnceda ukuba asebenzise ukukhawuleza.
5. Utshintsho kwi-intentence of the breast. Iimvakalelo zinokuba mnandi kakhulu, okanye ngokuphambene naso, kubangela ukungahambi kakuhle. Yonke iyodwa.
6. Ubume bentloko buguqukile. Ubume besifuba aluxhomekeke kakhulu ukuba uyasondla okanye awuyi. Eyona nto ibalulekileyo yesikhumba. Emva kokusondla, izicubu ezincinci zesifuba ziya kuqhubeka kwakhona, kwaye isifuba siza kubuya kwiminyaka engaphambili. Ukuthobela urhulumente wokutya kubaluleke kakhulu.
7. Umthombo wamanzi. I-orgasm yomama ongumntwana unokuhamba kunye ne-splashes encinci yobisi. Le hormone i-oxytocin isebenza. Iveliswa ngobuninzi bexesha lobudlova, i-lactation kunye ne-orgasm.
8. Yinyamekele ukukhulelwa kocalulo. Indlela ye-lactational amenorrhea ayikuthinteli ukuqala kokukhulelwa okutsha. Ngethuba lexesha lokutya, ukusetyenziswa kwe-spermicides, isixhobo se-intrauterine, okanye iikhondom ukongezwa kwakhona.
9. Khetha into. Mhlawumbi umama omncinci uya kufuneka athathe inxaxheba yecandelo eliphambili. Ngoko unceda intanda yakho ikuphelise ukwesaba ukukulimaza.
10. Ukuba awuphazamiseki. Qaphela ukuba kwiinyanga zokuqala zobomi, iintsana zilele kakhulu kwaye umntwana unako ukuvuka nanini na umzuzu. Ngoko ke, ngokwesini kuya kufuneka usebenzise ithuba lokuqala. Kubaluleke kakhulu ukuba umama aphumle aze aphazamiseke kwiingxaki zokunyanzela.
11. Uphi i-orgasm yam? Awuyi kuvuya ngokukhawuleza. Uphando lwabangamantombazana abancinci lubonisa ukuba abaninzi abantu babeyifuna oku ngaphezu konyaka. Phantse kwisiqingatha sababhinqululwazi abavumiweyo bavuma ukuba baqala ukufumana amaxesha angama-2 ngokuphindaphindiweyo.
Ngoko uyazi malunga nemithetho ephambili yesondo emva kokubeletha. Ngexesha apho kungekho ngesondo phakathi kwakho nomyeni, kubaluleke kakhulu ukugcina ubudlelwane bokwethemba naye. Unokuzaliswa kwintsapho yakho, kodwa oku akuthethi ukuba uyeke ukuba ube nye. Ufuna ukuvunyelwa omnye nomnye!
Ubomi bakho bobulili buya kutshintsha, ungamangalisi, oku kuqhelekileyo. Iimvakalelo zizahluka, mhlawumbi zikhanya. Ngoku makhe sijonge ngokuthe ngqo imigaqo ephambili, omele uyihlawule ukuba ufuna ukubuyisela iifom ezidala.
Ukuncwina kukuncedisa okokuqala ukubuyisela umzobo kwifom yangaphambili. Ukuveliswa kwe-oxytocin kunceda isibeleko ukuba senze isivumelwano kunye nobukhulu bayo bokuqala, kwaye xa ixiliswe, umzimba uphisa amafutha aqokelelwe ngexesha lokukhulelwa.
Ukomeleza izihlunu zesifuba, ungacinezela.
Ukomeleza izihlunu zesini, yenza uKegel usebenze. Imizuzwana emihlanu, unciphise imisipha uze ukhulule. Yenza umsebenzi xa uziva ukhululekile. Umzimba ophuculweyo kangangoko - cinga ukuba uphakamisa i-elevator ukuya kumgangatho wesithathu, hlala kumgangatho ngamnye ngemizuzwana emithathu. Emva koko ke "nciphise i-elevator".
Yenza ukunqanda kwesikhumba ukunceda ukuwahlula okuhlukeneyo kwiiyure ezine. Emva kokuqhawula, sebenzisa ukhenkco we-baby softening.
Umgulane wezilwanyana unokukucebisa ngokugqoka i-bandage postpartum. Hlola ngokukhawuleza iimvakalelo zakho. Akuboniswa kuwo wonke umntu.
Xa u tyelela i-gym, qaphela ukuba inkanuko yobisi isenokutshintsha, ngoko qhagamshelana nogqirha wakho.
Ukunciphisa inani lokutya. Ubungakanani bobisi obuveliswayo kwaye isixa sokutya asihambelani. Ukulinganiswa komama onesiko kufuneka kube nekhwalithi, kulinganise, kuqulethe zonke izinto eziyimfuneko kunye nokulandelela izinto. Zenzele iintsuku zokuzila kanye ngeveki.
Fumana iinkalo ezilungileyo zelizwe lakho langoku. Ngoku ungowesifazana kunanini ngaphambili.
Ewe, iimvakalelo emva kokubeletha azikho mnandi, kodwa ukuzalwa kobomi obutsha yiholide enkulu ebomini isibini esitshatileyo. Kukho amabhinqa abuye abuyele ngokukhawuleza, ngokoqobo kwiinyanga eziyi-3-4 kwaye ubuye bubuyele kwisimo esiqhelekileyo, kwaye isimo sengqondo sabuyela kwimvakalelo efanayo, kwaye emva kokuzalwa ngokwesini, ezo zibini ziqala kwiiveki ezimbini, kwaye ezinye zezi nkqubo zinokuhlala iminyaka emininzi. Kodwa kubalulekile umsebenzi omncinane kwaye umntwana uya kuba nabazali abonwabileyo kunye nosapho oluqinileyo.
Indlela yokudibanisa ubomi obusondeleyo nomyeni wakhe
Ukutshiza okufutshane okanye ukulala ngokukhawuleza?
Indlela yokuziphatha emva kobusuku bokuqala bothando?
Isini esilungileyo: ngaba kufanelekile?
Ukulungiselela izitya ezingabizi
Izandla zeHalloween 2017 kubantwana abasuka ephepheni, eplastiki kunye neengqungquthela - njani ekhaya ukuba benze izinto zabo ezenziwe ngezandla esikolweni nasezikolweni
Iipinapali ezidliwayo kunye nezondlo zinyango
Daikon kunye neCroatia
Iithubhu ezihlaza kunye nama-raspberries
I-Pecan nut: inzuzo, ingozi, zokupheka
Ukuzalwa kukaMariya oyiNtombi kaMariya 2017: Imbali yeeholide, imimiselo kunye nemihango, yavuyisana
Ngaba kukho na amadoda okwenene ngoku?
Ukugcina izithelo ekhaya
Ukukhulelwa nokukhupha okungapheliyo kwezixhobo
AmaSandwich nge saladi yeqanda
Isimo sezulu eMoscow naseMoscow ngoJanuwari 2018: Izibikezelo ze-Hydrometcentre zokuqala nokuphela kwenyanga
Yintoni yokupheka abantwana kwitheyibhile elimnandi lokuzalwa